Dzakanakisa dzimwe nzira dzekutsiva Yaourt muArch Linux | Linux Vakapindwa muropa
AUR (Arch Mushandisi Repository) inzvimbo inotungamirwa nenharaunda yevashandisi veArch Linux. Vashandisi veDebian kana Ubuntu vanogona kufunga nezveAUR seyakaenzana neiyo repository.
Kana mumwe munhu achigadzira software (kana pasuru) yeArch Linux, vanogona kuita kuti iwanikwe kune wese munhu kuburikidza neAUR. Nenzira iyi, nhamba hombe yekushandisa uye maturusi anogona kuwanikwa. iyo isingagone kuwanikwa natively mukati mepamutemo Arch Linux zvinyorwa.
Kuti uwane mapakeji aya zvinofanirwa kuve neAUR repository inogoneswa mukati medu faira rekumisikidza iro riri munzira /etc/pacman.conf. Nezvo zvinogoneswa isu tinongoda chete kutsigirwa kwechishandiso chinotibatsira kurodha pasi nekuisa kubva kuAUR.
Yaourt ndeimwe yeaya maturusi (AUR-vabatsiri) uye kutaura chimwe chezvinyanya kufarirwa nevashandisi veArch Linux. Yaourt mudziyo wePacman uyo wakabvumidza kuiswa kweAUR mapakeji paArch Linux.
Shandisa syntax imwechete sePacman. Parizvino, kukura kwaYaourt zvinosuruvarisa zviri pamutemo "Kukanganiswa" uye kunotsanangurwa se "kunetsa".
Nenzira iyi Yaourt iri kumiswa saka mashandisiro ayo anogona kumiririra matambudziko makuru mune ramangwana uye izvi zvinofanirwa kuchinjwa nekukurumidza sezvazvinogona kuitika kana yashandiswa.
Ndokusaka isu tinofanirwa kuita shanduko kubva kuYaourt kuenda kune iyo ichiri mukusimudzira uye ichishanda. Pakati pevakanakisa veAUR-vabatsiri vatinoenda kuendesa nhasi, iwe uchave unokwanisa kuwana mune vamwe vavo kutsiva Yaourt mune yako system.
aurman ndiyo imwe nzira yakanaka kuna Yaourt, pamwe yakanakisa pane zvese kutaura. Iyo syntax inobatwa naAurman yakafanana neyaPacman uye inotsigira iwo mamwe mashandiro semaneja wepakeji.
Zviripachena inotsigira kutsvaga kweAPUR mapakeji, inogona zvakare kushandiswa seyazvimiririra yekuvimbika solver.
Kuti uiise pane yako system, unofanirwa kuvhura terminal uye nyora inotevera mirairo:
Kana iwe uchida kutsvaga application uchishandisa aurman, iwe unofanirwa kunyora unotevera kuraira:
Kuisa application uchishandisa aurman:
Iye zvino kana iwe uchida kuita yekuvandudza system
Gadziridza iyo system, kusanganisira akaisirwa AUR mapakeji.
Sezvauchaona, syntax yakafanana saka mashandisiro ayo haafanire kumiririra chero dambudziko.
yay ndizvo mubatsiri weAUR akanyorwa mumutauro weGo. Uyu mubatsiri anotipa yakanyanya kushomeka interface, kutsvaga kwakafanana neYourt uye pamusoro pezvose hazvidi kutsamira kwekushanda kwayo.
Kuti uiise pane Arch Linux kana zvimwe zvinobva mairi, unofanirwa kunyora mirairo inotevera:
Iwo ekutanga mirairo yekushandisa ndeye, semuenzaniso kutsvaga pasuru kana kunyorera:
Kuisa application uchishandisa yay:
Kana iwe uchida kuita system yekuvandudza
Pakku mumwewo mubatsiri weAUR inogona kuve yakanakisa sarudzo kutsiva Yaourt. Uyu mubatsiri iri nyowani nyowani uye isinganyatso kuzivikanwa, asi haifanire kudzikiswa. Izvo hazvishaye chero chakakosha mashandiro saka zvakanaka chaizvo uye kukura kwayo kuchiri kutsva.
Kuti tiiise muArch Linux kana chimwe chinobva, isu tinofanirwa kuvhura terminal uye tigoita:
Kuti utsvage chishandiso uchishandisa pakku, ivo vanofanirwa kunyora unotevera kuraira:
Kana iwe uchida kuisa application uchishandisa pakku:
Kana iwe uchida iyo system yekuvandudza
Dzimwe nzira mbiri dzatinogona kuwana dziri Aurutils uye Aura, asi kana iwe uchida kuziva nezvevamwe vabatsiri veAUR unogona kushanyira chinotevera chinongedzo.
Pano ivo vanotipa isu yazvino inoshanda anoshanda AUR vabatsiri pamwe neese avo maficha uye rutsigiro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Dzimwe nzira dzakanakisa dzekutsiva Yaourt muArch Linux
Ndakaedza navo vese ... asi hapana kana chimwe chazvo chinondishandira ... vanokundikana mufakeroot kana rinoti harina izwi rekuita mukati meiyo pkgbuild ...
yaunokwanisa kuiisa yakananga kubva kunyowani nekuti iri mune "zvakajairika" zvinyorwa.
yay haisi munzvimbo dzekuchengetedza